I-Athanasian Creed (Quicumque): Umsebenzi wokholo
I-Quicumque: Umsebenzi wokholo
Inkolelo ye-Athanasian imiselwe ngokuqhelekileyo kwi-Saint Athanasius (296-373), okuphuma kuyo igama layo. (Le nkolo ikwabizwa ngokuba yi "Quicumque," eyona nto yokuqala inkolelo yesiLatini.) Njengamanye ama-creeds, afana ne- Apostles's Creed , i-Athanasian Creed ingumsebenzi wokholo lobuKristu; kodwa isifundo se-teloji esipheleleyo, kungenxa yokuba lide lide kunezithethe zamaKristu eziqhelekileyo.
USaint Athanasius wayichitha ubomi bakhe ekulweni nobuqhetseba be-Arian , obugwetywe kwiBhunga laseNicaea ngo-325. UArius wayengumbingeleli ophika ubungcwele bukaKristu ngokuphika ukuba kukho abantu abathathu kuThixo omnye. Ngaloo ndlela, i-Athanasian Creed ixhalabele kakhulu imfundiso yoBathathu Emnye.
Ngokwesiko, i-Athanasian Creed iye yafundwa kwiicawa kwiZiqu zintathu , ngeCawa emva kwePentekoste ngeCawa yePentekoste , nangona kungabonakaliyo namhlanje. Ukufunda i-Athanasian Creation ngasese okanye nentsapho yakho yindlela efanelekileyo yokwenza umbhiyozo weZiqu zintathu kwikhaya kunye nokuqonda ngokucacileyo imfihlelo yoBathathu Emithathu.
Nabani na onqwenela ukusindiswa, iimfuno ngaphezu kwazo zonke ukubamba inkolo yamaKatolika; ngaphandle kokuba elowo ligcina le nto kwaye ingenakuphilisa, akayi kukungabazeki ukuba aphele ngonaphakade.
Kodwa ikholwa yamaKatolika yile, ukuba sihlonela uThixo omnye kuBathathu Emnye, noBathathu Emnye ubunye; ningadambisi abantu, ningabi naluhlula; kuba kukho umntu omnye kaBawo, omnye oNyana, kunye nomnye uMoya oyiNgcwele; kodwa ubunjani bukaThixo boBawo noNyana noMoya oyiNgcwele ngenye, ubuqaqawuli babo bulingana, ubuqaqawuli babo buyingqumbo.
Kulo hlobo njengoYise, kunjalo noNyana, ngokunjalo nguMoya oyiNgcwele; UBawo akafundile, uNyana akafundile, kwaye uMoya oyiNgcwele akachaziwe; UBawo akanasiphelo, uNyana akanakunaphakade, kwaye uMoya oyiNgcwele akanakunaphakade; UBawo unaphakade, uNyana unaphakade, kwaye uMoya oyiNgcwele unaphakade; kwaye kunjalo akukho zintathu ezingapheliyo kodwa omnye ongunaphakade; njengokuba kungekho ziphilo ezi-3 ezingafundiweyo, nokuba zizinto ezintathu ezingapheliyo, kodwa enye engabhaliweyo, kwaye enye ingapheliyo; Ngokufanayo uYise unamandla onke, uNyana unamandla onke, kwaye uMoya oyiNgcwele unamandla onke; kwaye kunjalo akukho zintathu zi-almightys kodwa enye inamandla; Ngoko uYise unguThixo, uNyana unguThixo, kwaye uMoya oyiNgcwele unguThixo; kwaye ke akukho bathathu oothixo, kodwa kukho uThixo omnye; Ngoko uYise uyiNkosi, uNyana uyiNkosi, kwaye uMoya oyiNgcwele uyiNkosi; kwaye kunjalo akukho zinduna ezintathu, kodwa kukho iNkosi enye; kuba njengokuba sinyanzeliswa yinyaniso yamaKristu ukuvuma umntu ngamnye njengoThixo, kunye neNkosi, ngoko-ke siyanqatshelwe yinkonzo yamaKatolika ukuba kukho oothixo abathathu okanye iitronti ezintathu.
UBawo akenzanga, akadalwanga, akazalelwa ngabani na. UNyana uvela kuYise yodwa, engenziwanga okanye edalwa, kodwa ozelwe. UMoya oyiNgcwele uvela kuYise noNyana, ongenziwanga, engadalwa, okanye ozelwe, kodwa oqhubekayo.
Ngoko, ngoko, nguYise omnye, kungekhona ootata abathathu; Ndodana enye, kungekhona oonyana abathathu; Omnye uMoya oyiNgcwele, kungekhona iMimoya Engcwele emithathu; kwaye kuLuqu-zintathu akukho nto yokuqala okanye kamva, akukho nto inkulu okanye ingaphantsi, kodwa bonke abantu abathathu baxhomekeke kunye kunye kunye kunye, ngokokuba kuzo zonke iinkalo, njengoko sele kushiwo ngasentla, ubumbano boBathathu Emnye, noBathathu Emnye babumbene kufuneka ihlonishwe. Ngoko ke, lowo ofuna ukusindiswa, cinga ngoko ngoBathathu Emnye.
Kodwa kuyimfuneko yokusindiswa ngonaphakade ekholelwa ngokuthembeka kunye nokuzalwa kweNkosi yethu uYesu Kristu.
Ngako oko, lukholo olufanelekileyo, ukuba sikholwe kwaye sivume, ukuba iNkosi yethu uYesu Kristu, uNyana kaThixo unguThixo nomntu. UThixo uzalwe yintsimbi kaYise ngaphambi kwexesha, kwaye ngumntu ozelwe yintlungu kaMama ngexesha elifanelekileyo: UThixo ogqibeleleyo, umntu ofezekileyo, onomphefumlo onengqiqo nomzimba womntu, olingana noYise ngokwendlela yakhe UThixo, ngaphantsi kukaBawo ngokubhekiselele kuluntu.
Nangona yena unguThixo nomntu, kodwa akabini ababini, kodwa unguKristu omnye; enye ke, kungekhona ngokuguqulwa kobuthixo phakathi komzimba womntu, kodwa ngenxa yokuthathwa kobuntu kuThixo; ngokuqinisekileyo kungekhona ngokudideka kwezinto, kodwa ngobunye bomntu. Kuba njengokuba umphefumlo nomzimba ungumntu oyedwa, ngoko uThixo nomntu unguKristu omnye.
Wahlupheka ngenxa yosindiso lwethu, wehla esihogweni, ngosuku lwesithathu wavuka kwakhona kwabafileyo, wenyuka waya ezulwini, ehleli ngakwesokunene sikaThixo uYise uSomandla; Uza kuza kubagweba abaphilayo nabafileyo; Ekufikeni kwakhe bonke abantu baya kuvuka kwakhona kunye nemizimba yabo baza kuphendula ingxelo yezenzo zabo; abo benza okulungileyo baya kubomi obungunaphakade, kodwa abo benza okubi, baye emlilweni ongunaphakade.
Le yikholwa yamaKatolika; Ngaphandle kokuba wonke umntu akholelwe okuthembekileyo kwaye eqinileyo, akanako ukusindiswa. Amen.
Kutheni UThixo Wandenza?
Ukukhetha i-Calibrber ye-Paintball ye-Right
INTSHAYELELO Igama lomnini igama kunye nomvelaphi
Iingcebiso ezintlanu zokuphepha ukuhlahlela kwiCasino
Uludwe lweSizwe-nge-State List of Schools Free Public, K-12